USES Ndị na-emepụta ihe na ndị na - ere ya - China USES Factory
Maka ike na nkwụsi ike, a na-eji mpempe akwụkwọ DHUA acrylic na enyo na ngwa ngwa njem, enyo njem na enyo ụgbọ ala.
• Enyo convex
• Nlegharị anya na-enyo, gosipụtara enyo
Ihe ndị a na-ejikarị eme ihe maka ngwa ọkụ bụ acrylic na polycarbonate. Anyị acrylic ngwaahịa nwere ike iji na-etolite doro anya ma ọ bụ na-agbasa lenses na residential, ụkpụrụ ụlọ na azụmahịa ngwa ngwa. Nwere ike ịhọrọ si anyị acrylic ngwaahịa izute teknuzu na visual chọrọ nke gị oru ngo.
• Ogwe ndu ndu (LGP)
• ọkụ obibi
• ọkụ ọkụ azụmahịa
Thermoplastics bụ ezigbo ụzọ maka ngosipụta na ihe ọhụrụ. Nhọrọ anyị nke dị elu, mpempe akwụkwọ acryli dị ọtụtụ na ngwa enyo enyo na-enyere ndị na-emepụta aka iweta ọhụụ ha na ndụ. Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke agba, ọkpụrụkpụ, ihe nakawa etu esi, mpempe akwụkwọ nha na polima formulations iji gboo mkpa nke imerime nka na imewe ngwa.
Na elu okpomọkụ na-eguzogide, elu mmetụta ike, mgbochi foogu na elu larịị nke kristal doo anya, DHUA polycarbonate sheeting bụ ezigbo oke maka eze echebe ihu ọta na eze enyo.
• Dental / n'Ọnụ enyo
• Ọta mkpuchi ihu
DHUA na-enye ọtụtụ mpempe akwụkwọ plastik mara mma nke ọma, dịka acrylic, polycarbonate, polystyrene na PETG, iji welie ngosi ngwaahịa ọ bụla. Ihe plastik a dị mma maka ngosipụta nke ịzụta (POP) iji nyere aka ịbawanye ahịa ma gbanwee ihe nchọgharị nkịtị ka ha na-akwụ ndị na-azụ ahịa ụgwọ maka ịdị mfe nke ịgha ụgha, njirimara mma mara mma, ịdị arọ na ọnụ ahịa, yana ịbawanye ogologo oge na-eme ka ndụ POP dị ogologo. ngosipụta ma chekwaa ihe ndozi.